Ikhaya IZITOLO ZaseNingizimu AMERICA FOOTBALL Abadlali bebhola laseBrazil UGabriel Barbosa Indaba Yobuntwana Nama-Untold Biography Amaqiniso
UGabriel Barbosa Indaba Yobuntwana Nama-Untold Biography Amaqiniso. Ama-Credits Wezithombe: SportVideosMM ne-Instagram
I-LB inikeza iNdaba Egcwele Yombono weBhola ngesiteketiso “Gabigol”. Indaba yethu yeGabriel Barbosa Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawuleka kusukela ngesikhathi sakhe sobuntwana kuze kube manje.
Impilo nokuvuka kukaGabriel Barbosa. Ama-Credits Wezithombe: I-Instagram neDailyMail.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngefomu lakhe lokushaya amagoli namakhono obuchwepheshe. Kodwa-ke, bambalwa kuphela ababheka i-Biography kaGabriel Barbosa okuyinto ekhangayo. Manje ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale.
I-Gabriel Barbosa Indaba Yobuntwana Nama-Untold Biography Amaqiniso - Imvelaphi Yokuphila Nokuqala Komndeni
Dlulisela phambili isidlali UGabriel Barbosa Almeida wazalwa ngosuku lwe-30th luka-Agasti 1996, kumasipala waseSão Bernardo do Campo, emaphethelweni eSão Paulo eBrazil. Ungowokuqala ezinganeni ezimbili azalwa ngunina, uLindalva Barbosa nakuyise, uValdemir Barbosa. Bheka, isithombe sabazali bakaGabriel Barbosa ngesikhathi sokuhlangana kwabo.
UGabriel Barbosa umzali uValdemir noLindalva. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Umdlali webhola lezinyawo omangalisayo wobuzwe baseBrazillian obunezimpande zemindeni yamaPutukezi wakhuliswa esimeni semindeni ephakathi nendawo endaweni yaseMontanhão, kumasipala wakhe wokuzalwa lapho akhulela khona eceleni kukadadewabo omncane, uDhiovanna Barbosa.
Ukukhulela eMontanhão uGabriel osemncane wayenobuntwana obuthanda ibhola ebelicekelwa phansi udlame olwenzeka njalo komakhelwane. Ukuxabana kwesinye isikhathi bekukhulu kakhulu ukuthi isigqi esididayo sokuqhuma kwezibhamu eduze sasihlala sithumela umfana omncane ngaleso sikhathi nabazali bakhe ukuba baphephe ngaphansi kwamatafula nosofa.
UGabriel Omncane wayenobuntwana obathanda ibhola ngesikhathi esakhula endaweni yaseMontanhão. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
I-Gabriel Barbosa Indaba Yobuntwana Nama-Untold Biography Amaqiniso - I-Education ne-Career Buildup
Njalo lapho uGabriel wayengekho ngaphansi kwetafula noma kusofa wayethatha aye emigwaqweni ukuyodlala ibhola njengezingane eziningi zobudala bakhe. Esekelwa ukusekelwa kothando komndeni wakhe, uGabriel waqala ukuziqeqesha kwezemidlalo yangaphakathi yebhola eyayibizwa ngeFutsal. Akubanga isikhathi esingakanani ngaphambi kokuba umdala oneminyaka engu-8- aqale ukuqhudelana emidlalweni yokuhlungela uhlangothi lweqembu lakhe lasekhaya - iSao Paulo.
Ngosuku lomdlalo omuhle ne-Santos, uGabriel watshengisa amakhono ahlekisayo ahlekisa ngenganekwane kaSanto uZito. Ngakho-ke uGabriel wamenyelwa ukujoyina izinqubo zentsha zeSanto FC lapho ayezosebenzisa khona ingxenye engcono yomsebenzi wakhe wokuqala edlala eceleni komngane wakhe omkhulu Neymar Jr.
Isithombe esingajwayelekile sikaGabriel Barbosa osemusha kanye noNeymar Jr ngezinsuku zabo zebhola zobusha eSantos FC. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
I-Gabriel Barbosa Indaba Yobuntwana Nama-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
Ngenkathi eseSantos, uGabriel wakhanya njengoba ekhuphuka ezinhlwini zentsha yeClub. Ngesikhathi uGabriel efika eminyakeni eyisishiyagalombili neklabhu, wayesenerekhodi elimangazayo lokulinganiselwa kwamagoli we-600 nokubala. Ifomu enhle kangaka ebabazekayo yathola uGabriel igama lesidlaliso elithi “Gabigol” futhi yamtholela indawo eceleni kwejunior yaseBrazil.
Ngemuva kokuthanda kakhulu udumo lukaGabriel, lowo owayengumqeqeshi weSantos, uMuricy Ramalho wacela uGabriel ukuthi aqale ukuziqeqesha neqembu eliphakeme lekilabhu. ISantos FC yaqhubeka nokubopha uGabriel phansi nenkontileka yesikhathi eside ye- $ 50million futhi yayibuka ngenenjabulo ibuka ifomu ngemuva kokuzenzela umdwebo njengomuntu oneminyaka engu-16.
UGabriel Barbosa wayeneminyaka engu-16 ngenkathi uSantos emnikeza inkontileka yakhe yokuqala yobuchwepheshe e2013. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
I-Gabriel Barbosa Indaba Yobuntwana Nama-Untold Biography Amaqiniso - Umlando Wendlela Yokudumisa
I-2016 yayiwukuhlanganiswa konyaka wezemidlalo omuhle nobubi kaGabriel. Ukuze aqale ngokuhle, wathola isimemo sokuthi ajoyine iqembu laseBrazil lama-Olimpiki eRio 2016 futhi wasiza iqembu elingaphansi kwe23 lanqoba indondo yegolide okokuqala emlandweni wabo. Ngemuva kweMidlalo yama-Olimpiki, uGabriel uthole isicoco sokuya e-Inter Milan lapho alwa khona kanzima ukuthola ibhola lakhe.
Ehlangene nefomu elibi likaGabriel, i-Inter Milan imbolekise eBenfica lapho izimpi zakhe ziqhubeka khona. Ngesikhathi kuthola usizi lukaGabriel e-Italy, abalandeli nezintatheli behlise imbandezelo yokugxekwa kuyena ngokuveza ukuthi usekhuluphele futhi akafanelwe yigama lakhe lesidlaliso elithi “Gabigol” elalimele igoli elinabile.
UGabriel Barbosa ukwehluleka ukuhlaba umxhwele ku-Inter Milan naseBenfica kumenze wazizwa engaphansi komdlali ngenkathi abaningi bekhombisa ukuthi usekhuluphele ngokweqile. Isikweletu Sezithombe: I-FourFourTwo.
I-Gabriel Barbosa Indaba Yobuntwana Nama-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphakama Ukudumisa Indaba
UGabriel wagcina ebolekwe ekilabhini yakhe yobuntwana iSantos lapho azihlenge ngokuba ngumdlali ovelele ku-2018 / 2019 edition yeBrasileirão enezinhloso ze-18. "Ikhaya elimnandi" uGabriel wayevame ukumemeza njengoba engaqondi ukuthi ubuyisela kanjani i-mojo yakhe.
UGabriel Barbosa wazihlenga kuSantos FC ngefomu elinamaphuzu okushaya amagoli elivale abagxeki bakhe. Ama-Credits Wezithombe: I-YouTube.
Ukuqhubekela phambili ngesikhathi sokubhala, kudlala ngemalimboleko yeFlamengo FC lapho sekuvele kunamagoli we-34 ekubonakaleni kwe40! Yini enye? UGabriel usayine izintshisekelo zokudlalela uhlangothi lwePremier League Liverpool. Yize kukhona ama-titbits okungaqiniseki ngokuzungeza umnyakazo ohleliwe, noma uluphi uhlangothi lwebhola uGabriel ozithola esengumlando.
I-Gabriel Barbosa Indaba Yobuntwana Nama-Untold Biography Amaqiniso - Imininingwane Yokuphila Ubudlelwane
Kude namashejimenti ebhola amatasa likaGabriel, unempilo ethokozisayo eyambona ekhonjwe ngudadewabo wegazi likaNeymar - uRafaella Santos. Ukuqhubekela phambili akwaziwa ukuthi wayenentombi yomphakathi ngaphambi kokuqala ukuthandana noRafaella e2017.
Bathandane izinyanga ezimbalwa ngaphambi kokuhamba ngezindlela ezihlukile kepha bavuselela amalangadala amadala ngo-Ephreli 2019. Akekho kulezi zinyoni zothando onendodana noma yendodakazi yakhe ngaphandle komshado ngenkathi abalandeli bobuhlobo babo bethemba ukuthi i-duo ithatha izinto ziye ezingeni elilandelayo ngokuganisana maduze.
UGabriel Barbosa uthandana nomuntu athandana nentombi kaNeymar Jr uRafaella Santos. Isikweletu Sezithombe: I-TheSun.
I-Gabriel Barbosa Indaba Yobuntwana Nama-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso Okuphila Komndeni
Kuthatha umndeni ukwakha umgadli oqhubeka isikhathi eside njengoGabriel. Sikulethela amaqiniso ngempilo yomndeni kaGabriel eqala nabazali bakhe.
Mayelana nobaba nonina kaGabriel Barbosa: ULindalva & uValdemir Barbosa ngumama nobaba kaGabriel ngokulandelana. Abazali abasuka emndenini omncane baletha uGabriel ebhola ibhola besebancane futhi kwesinye isikhathi wayeboleka imali ukuze enze lowo odlala naye akwazi ukuqeqeshwa ebholeni. Bayaziqhenya ngalokho uGabriel asephenduke ngakho futhi bahlala befaka nezithombe zobuntwana bakhe esezandleni zabo zezindaba zokuxhumana ukukhuluma indaba yakhe.
Izithombe Zobuntwana Ezingajwayelekile zikaGabriel Barbosa nabazali bakhe. Ama-Credits Wezithombe: Instagram.
Mayelana nezingane zakubo kaGabriel Barbosa: UGabriel akanaye umfowethu kodwa udadewabo omncane okhonjwe njengoDhiovanna Barbosa. UDhiovanna uyimodeli ye-Instagram onentshisekelo yokufunda izilimi zakwamanye amazwe. Usondele kakhulu kumfowabo omdala uGabriel ukuthi amthole nge-tattoo yokumkhumbuza ukuthi uhlala esondele kakhulu kungakhathaleki ukuthi uhamba kanjani emhlabeni jikelele.
UGabriel Barbosa nodadewabo. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Mayelana nezihlobo zikaGabriel Barbosa: Ngokuphathelene nokhokho bakaGabriel Barbosa nempilo yomndeni eyengeziwe, kuncane okwaziwayo mayelana nogogo nomkhulu wakhe ngenkathi umkhulu wakhe ongumama kanye nogogo wakhe bengazange bakhonjwe isikhathi sokubhala. Ngokunjalo, awkho amarekhodi omalume bomdlali, umalumekazi nomzala wakhe ngenkathi yena engenamshana noma umakhelwane ngesikhathi sokubhala.
I-Gabriel Barbosa Indaba Yobuntwana Nama-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso okuphila komuntu siqu
Izici zobuntu ezichaza uGabriel Barbosa zophawu lweVirgo Zodiac. Kubandakanya ukuzala kwakhe kokubonisa ubuhle, ukuvumelana, ukuncintisana, nobuciko. Ngaphezu kwalokho, uGabriel unesifiso sokufuna ukuphelela futhi ngesizotha wembule imininingwane ephathelene nempilo yakhe yangasese neyomuntu siqu.
Khuluma ngezinto zikaGabriel nezinto azithandayo, unemisebenzi eminingi yokudlala ehlanganisa ukulalela umculo, ukucula, ukubhukuda, ukuhambela amabhishi amahle nokuchitha isikhathi esiningi nomndeni wakhe nabangane.
UGabriel Barbosa uthanda ukubhukuda nokuchitha isikhathi emabhishi. Ama-Credits Wezithombe: Instagram.
I-Gabriel Barbosa Indaba Yobuntwana Nama-Untold Biography Amaqiniso - Ama-Lifestyle Facts
Yize uGabriel Barbosa enenani lemakethe lama- € 23.00 million ngaleso sikhathi sokubhala, inani lakhe nethenjwa alikaziwa ngenxa yokuthi uhola kancane emaholweni nasemaholweni njengoba kwenzeka ngoDisemba 2019.
Ngenxa yalokhu, uGabriel akahlali ngokuphila impilo kanokusho yabadlali abafezayo abanazo izindlu ezibizayo futhi bagibela izimoto ezivamile. Kodwa-ke, unemoto eguquguqukayo eguquguqukayo futhi uyazi ukuthi angazisebenzisa kanjani amaholide ezindaweni ezibizayo zomhlaba wonke.
UGabriel Barbosa uhamba ngemoto yakhe eguquguqukayo. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
I-Gabriel Barbosa Indaba Yobuntwana Nama-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso angaziwa
Ukugoqa umlando wethu wobuntwana kaGabriel Barbosa kanye ne-biography lapha amaqiniso angaziwa noma angaziwa angafakiwe kwi-bio yakhe.
Ukubhema Nokuphuza: UGabriel Barbosa akaphathwanga ukubhema, futhi akatholakalanga ukuthi ujabulele izingilazi zeziphuzo ezinzima. Umdlali odlala phambili ugxile ekubeni nempilo enhle engqondweni nasemzimbeni njengoba elungiselela ukuthatha inselelo ebekwa yi-top-flight football presents.
Ama-tattoos: Mhlawumbe ongomunye wababazi bezinwele abadumile kakhulu emlandweni wezemidlalo, uGabriel unobuciko bomzimba emhlane wakhe, izandla, imilenze nentamo. Okuphawuleka phakathi kwama-tattoos yimifanekiso yabazali bakhe, udadewabo nengonyama enomdlwane ononya.
Imibono yama-torso kaGabriel Barbosa. Ama-Credits Wezithombe: Instagram.
Inkolo: Umdlalisi kungenzeka angabi namazwi ngenkolo kepha ama-tattoos akhe abonisa isithombe sikaJesu ukhuluma ivolumu ngokuhlangana kwakhe kwezenkolo, ngokungahambisani nokuthanda ubukatoliki.
Uyasibona isithombe sikaJesu engalweni kaGabriel Barbosa yangakwesokudla?
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda kwethu UGabriel Barbosa Indaba Yabantwana kanye ne-Untold Biography Facts. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.
Usuku olushintshiwe: Meyi 31, 2020